Tag: cazoomi | Martech Zone
Delivra Enlists Cazoomi AppSync® ho an'ny CRM
Talata, May 1, 2012 Alahady, Septambra 8, 2013 Douglas Karr
Ny mpanohana ny mailaka mailaka, Delivra, dia nanambara ny fidirana amin'ny sehatra Netsuite sy Microsoft Dynamics CRM mampiasa Cazoomi. Raha mbola tsy naheno momba ny Cazoomi SyncApps® ianao dia fampiharana rahona manaitra be izay mampifangaro ny angona fifandraisanao amin'ny rafitra ara-bola, ecommerce, mpamatsy mailaka ary / na rafi-pitantanana fifandraisana amin'ny mpanjifa. Ho an'ny mpanjifa orinasa, ny fampiharana Cazoomi dia lafo lavitra noho ny fampandrosoana ilaina. Ary tsy mila manahy momba ny orinasa manavao ny fampidirany… Cazoomi tsy maintsy! Ankoatra
Efa elaela izay no tsy nanaiky momba ny gazety. Hatramin'ny nahatongavako tamin'ny indostria dia mbola ao amin'ny rako io ary mety ho izany foana. Ny gazety voalohany niasako dia efa amidy, ary ny gazety eto an-toerana kosa dia misento farany. Tahaka ny maro, tsy mamaky gazety intsony aho, raha tsy mahita lahatsoratra atolotra amin'ny alàlan'ny Twitter na iray amin'ireo fahana izay nohaniko. Niresaka momba ny gazety .NET tamin'ity volana ity
Mifandray ny fifamoivoizana, Ampy izay aho
Alahady, Martsa 1, 2009 Zoma, Jona 20, 2014 Douglas Karr
Mitombo ny fifamoivoizana. Toa variana amin'ny famoahana ny atiny ho any amin'ny toerana sy fikarohana maro araka izay tratrany ny tsirairay. Ho an'ny orinasa, mahafinaritra foana ny mahazo fankasitrahana nasionaly na isam-paritra izay mahaliana ny orinasanao. Ny fifamoivoizana mety ve anefa? Ny fiasana amin'ny sehatry ny Gazety dia nanome ahy fijery mahavariana amin'ilay fanenjehana mahatsikaiky ho an'ny masomaso bebe kokoa. Gazety maro no manohy manisy fihenam-bidy (sy mampihena ny lanjany) ny gazetin'izy ireo fotsiny